I-Webhose.io isenza ukuba sifumane idatha yenkcazelo yangempela kwimithombo ye-intanethi nakwiisayithi. Inxalenye eyona nto kukuba le migodi yenkqubo kwaye iyakhupha iziza ngokukhawuleza ize inikeze idatha kwifom ecocekileyo efanelekileyo. Kwakhona kusenza sikwazi ukukrazula idatha ngokusekelwe kumagama abo, amagama, iilwimi kunye nendalo. Iziphumo zokugqibela zingatholakala ngefom yeifayile ze-XML, ze-RSS kunye ne-JSON. Nangona le nkqubo ayikho iindleko, ungafikelela kwinguqu ye-premium yayo ukuba ufuna ukusebenzisa iWebhose.io ngenjongo zorhwebo. Isicwangciso esikhokhelwayo siyakunceda ukuba uthumele izicelo ezininzi ze-HTTP kumncedisi oyintloko, okwenza kube lula kuwe ukuba uphawule kwaye udibanise iziza.
I-scrapy yinkqubo enamandla kunye neyokhenkcela yokwenza i-intanethi kwi-intanethi. Inxalenye eyona nto kukuba le nkqubo ixhaswa luluntu lweengcali, onokungena kulo kumnxeba ngamacandelo ancedo kunye